14 askari oo Turki ah oo lagu dilay dagaal dhexmaray maleeshiyada ISIS oo ka dhacay gudaha Suuriya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorld14 askari oo Turki ah oo lagu dilay dagaal dhexmaray maleeshiyada ISIS oo ka dhacay gudaha Suuriya
December 22, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ciidamada Turkiga ayaa gudaha u galay dalka Suuriya bishii lasoo dhaafay ee Agoosto. [Sawirka: Reuters]
Ankara-(Puntland Mirror) Afar iyo toban askari oo Turki ah ayaa lagu dilay dagaal culus oo dhexmaray kooxda ISIS sidoo kale loo yaqaan Daacish, sida ay sheegeen ciidamada Turkiga.
Dagaalka ayaa shalay oo Arbaco ahayd waxa uu ka dhacay magaalada al-Bab oo kutaala gudaha dalka Suuriya.
Sidoo kale waxaa dagaalkaas ku dhaawacmay 33 askari oo Turki ah, sida ay wararku sheegayaan.
Ciidamada Turkiga ayaa sheegay in maleeshiyada Daacish ay ka dileen ku dhawaad 138 dagaalyahan, balse warkaas si buuxda looma xaqiijin karo.
Waa khasaarihii ugu badnaa oo soo gaara ciidamada Turkiga hal maalin, tan iyo markii ay howlgalka milatari ku qaadeen gudaha Suuriya bishii lasoo dhaafay ee Agoosto.
January 29, 2017 Commandoska Mareykanka oo 14 maleeshiyo ururka Al-Qaacida katirsan ku dilay weerar ay ka geysteen gudaha dalka Yeman